ဒုက္ခသည်များအတွက်လိင်တူချစ်သူသတင်းအချက်အလက်များ, ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ | USAHello | USAHello
လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့လိင်တူချစ်သူများအတွက်ရပ်တည်, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးနှင့်လိင်. နိုင်ငံတိုင်းနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်, များစွာသောလူသည်ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏တဦးတည်းပိုင်. USA တွင်, လိင်တူချစ်သူလူဦးသည်အခြားလူတိုင်းအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောအခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များ, တူညီသောလိင်၏မိတ်ဖက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပိုင်ခွင့်အပါအဝင်.
အဆိုပါလိင်တူချစ်သူ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူတွေကို, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုး, သို့မဟုတ်လိင် (လိင်တူချစ်သူ) အသိုင်းအဝိုင်းကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံကနေလာ. လိင်တူချစ်သူလူမျိုးအားလုံးပါဝင်သည်, လူမျိုးစု, အသက်အရွယ်မရွေး, အဆင့်အတန်း, နှင့်လူမျိုးစုများ. ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် 11 USA တွင်သန်းလိင်တူချစ်သူလူဦး. ဒီအကြောင်းဖြစ်ပါသည် 5% လူဦးရေရဲ့.
လိင်အကြားကူးပြောင်းကြသူလိင်တူမိတ်ဖက်များနှင့်လူဦးရှိသည်သောပြည်သူ့လိင်တူချစ်သူအဖွစျဖျောပွနိုငျ. လိင်တူချစ်သူလည်းသူတို့ရဲ့ကျားသို့မဟုတ်လိင်အကြောင်းကိုသေချာမသိကြသူတွေကိုလည်းပါဝင်သည်. အချို့လူများကမိမိတို့၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုစကားလုံးများကိုပြောင်းလဲသွား.
တွင် 2015, အမေရိကန်တရားရုံးချုပ် (တိုင်းပြည်အတွင်းအမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်) တူညီသောလိင်၏လူနှစ်ဦးအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားဥပဒေရေးရာဖြစ်ကြောင်းကြေညာ. ယူအက်စ်အေအများစုအတွက်, တူညီသောလိင်၏လူနှစ်ဦးအကြားရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတစ်လူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြားသူတို့အားတန်းတူအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ, လူအပေါင်းတို့သည်လိင်တူချစ်သူလူများ၏လက်ခံကြသည်မဟုတ်. သငျသညျသွားလာသည့်အခါ, ဘုံထင်မြင်ချက်များဒါကြောင့်သင်လုံခြုံနေဖို့နိုင်ပါတယ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေ့လာသင်ယူ.
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးနှင့်လိင်အဓိပ္ပာယ်
L ကို: လိင်တူချစ်သူ
, G: လိင်တူချစ်သူ
အများစုကတော့အခွားသောသူအဘို့ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတွေ့ကြုံသူတစ်ဦးသည်လူကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသော. ဤဝေါဟာရကိုတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးလိင်တူချင်းသို့မဟုတ်တူညီသော-ကျား, မဖက်ဘို့ရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတွေ့ကြုံခံစားတဲ့သူနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုရည်ညွှန်းအသုံးပြုသည်.
B က: ရိုးရိုး
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးဆီသို့ရင်ခုန်စရာနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတွေ့ကြုံသူတစ်ယောက်ျားမိန်းမ.
T က: လိင်သို့မဟုတ် transexual
သူတို့ထဲသို့မွေးဖွားခဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏လိင်နှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်မထားဘူးသူကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျား fit မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူးအပြောင်းအချို့ကိုစင်မြင့်များတွင်ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှဆွဲဆောင်သူရည်ညွှန်းမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသက်တမ်းအပေါငျးတို့သအခြားသူများထက်ကွဲပြားခြားနားသည်. လိင်ပြောင်းသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကလည်းလိင်တူချစ်သူနိုင်ပါတယ်, ဥပမာ.
တခါတလေ, သငျသညျကဆက်ပြောသည်ပိုပြီးအတိုကောက်အတူဝေါဟာရကိုလိင်တူချစ်သူမြင်စေခြင်းငှါ. ဥပမာတစ်ခု LGBTIAA ဖြစ်ပါသည်. ဤသည်အခြားအက္ခရာများကိုဆိုလိုတာဘာလဲ.
မေး: Queer / သညျ့မေးခှနျး
ဤဝေါဟာရကိုအတိတ်ကာလစော်ကားမှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်. ယခု, ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းပြောဆိုရန်အများအပြားအသုံးပြု. Queer လိင်တူချစ်သူအသုံးပြု, ရိုးရိုး, genderqueer, နှင့်လိင်ကလူ. ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးကိုကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုဆိုလိုတယ်. ယေဘုယျအား, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကျား, မများနှင့်လိင်လူအများစုရဲ့ထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုပါတယ်. သို့မဟုတ်သင်နေတုန်းပဲသင်ခံစားရပုံကိုထွက်ရှာဖွေစေခြင်းငှါ.
ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းပိုင်ကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့သူတစ်ဦးတစ်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါကသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်ပွားအစိတ်အပိုင်းများကိုရောနှောလျက်ရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းငှါ,. တချို့ကအထီးဖြစ်နိုင်သည်, အခြားသူတွေအမျိုးသမီးနေစဉ်. ဒါဟာအစကသူတို့မျိုးဗီဇနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာခြင်းပိုင်ဆိုလိုနိုင်.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုတွေ့ကြုံခံစားပါဘူးသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးက. Asexual လူတွေကဆက်ဆံရေးအတွက်ရက်စွဲနှင့်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလိင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. ဤသည်ကိုလည်းဆိုလိုနိုင်ပါတယ် “မဟာမိတျဖှဲ့ထားသော”. ဤသည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်နေသောလူများ၏အခွင့်အရေးများကိုထောကျပံ့.
တစ်မဟာမိတ်လိင်ကွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် (လည်းဖြောင့်အဖြစ်လူသိများ) ဒါပေမယ့် LGBTQIAA အသိုင်းအဝိုင်းထောက်ခံပါသည်
လိင်တူချစ်သူလူတို့တဘက်၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတားဆီးကြောင်းဥပဒေများရှိပါတယ်. ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဆိုးဘာသာစကားသို့မဟုတ်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများရှိပြီးဒါဟာသင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်မြို့တွင်းအတွက်ဥပဒေများကိုလေ့လာသင်ယူရန်အရေးကြီးပါသည်.
သငျသညျထောက်ခံမှုနှင့်လုပ်မိတ်ဆွေများကိုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာလိင်တူချစ်သူလူတို့အဘို့များစွာသောနေရာများရှိပါသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုမြို့ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများရှိပါတယ်, စင်တာများ, ပါတီများက, ပင်လိင်တူချစ်သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ. လိင်တူချစ်သူစင်တာများ အရင်းမြစ်များရှိသည်နှင့် trans ဆိုတဲ့အုပ်စုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များစည်းရုံး.
သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာ trans ဆိုတဲ့အုပ်စုများတွေ့ရှိရန်, သငျသညျကို Facebook သို့မဟုတ် Google ကိုသုံးနိုင်သည်. အတော်များများကအုပ်စုများ Facebook ပေါ်မှာရှိပါတယ်. အွန်လိုင်းအုပ်စုများအဘို့အကြည့်ဖို့, စကားတော်ကိုသုံးပါ “trans ဆိုတဲ့” သို့မဟုတ် “queer လဲလှယ်” အတူတူ သင့်ရဲ့မြို့အမည်သို့မဟုတ်အနီးအနားရှိပိုကြီးတဲ့မြို့နှင့်အတူ.
လိင်ကလူလိင်တူချစ်သူထက်အချို့သောကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများရှိ, လိင်တူချစ်သူ, နှင့်ရိုးရိုးလူတွေ. သင်တို့သည်ဤစာမကျြနှာမှတဆငျ့ Transgender များကလူအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါလိင် (ထို့အပြင် trans ဆိုတဲ့အဖြစ်လူသိများ) အသိုင်းအဝိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုသည်အထူးစည်းမျဉ်းများရှိပါတယ်.
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရတဲ့အခါ, လိင်ကလူတိကျသောအခွင့်အရေးများရှိ. သူတို့ရဲ့ကျားပြောင်းလဲနေတဲ့ပြီးနောက်, သူတို့များသောအားဖြင့်အသစ်သောမှတ်ပုံတင်ရရှိရန်လိုခငျြ. ဒါကယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့်ကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်များပါဝင်နိုင်ပါသည်.
အိမ်ရှင်, အလုပ်ရှင်များနှင့်လုပ်ဖော်တရားဝင် trans ဆိုတဲ့လူတို့တဘက်၌ခွဲခြားမှုခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်.
ကျား reassignment နှင့် Transit
ကျား reassignment လိင်လူတို့သည်မိမိတို့ကျားသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကိုက်ညီကူညီပေးသည်ဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်.
လိင်တူချစ်သူလူငယ်များနိုင် TrevorSpace သွားရောက်ကြည့်ရှု. ဒါက Trevor Project မှနေဖြင့် run နေပါသည်, လိင်တူချစ်သူလူငယ်များအတွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု. TrevorSpace လူငယ်များဟာသူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလိင်တူချစ်သူလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အတှကျ monitor site ကိုဖြစ်ပါတယ်.
PFLAG လိင်တူချစ်သူမိသားစုဝင်များနှင့်အတူလူတို့သည်မိမိတို့ချစ်ရသူနားလည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့ website တွင်, သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်သည် ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကို.
MedlinePlus လည်းရှိပါတယ် လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်.
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကျန်းမာရေးနှင့် LGBTQ + အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်သုခချမ်းသာလမ်းညွှန် Drugwatch.com ထံမှ.
Addictioncampuses အဆိုပါ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအဘို့အစွဲနှင့်အတူကမ်းလှမ်းမှုအကူအညီနဲ့